Hlala usazi okwenzekayo ngamacebiso endlela zokuhamba ngexesha
leCOVID-19 nasemva kwalo.
Sicela intsapho ka-Airbnb ukuba ilandele izinto ezimele zenziwe zempilo nokhuseleko zeCOVID-19.
Ababuki zindwendwe kufuneka balandele inkqubo yethu yokucoca okuphuculiweyo enamanyathelo amahlanu nexhaswa zingcali.
Inkqubo yethu yokucoca ephuculiweyo enamanyathelo amahlanu, nexhaswa zingcali, ayipheleli nje ekucoceni okuqhelekileyo kodwa linyathelo elibalulekileyo elinokwenziwa Ngababuki Zindwendwe ukuze bancedise ekuqinisekiseni ukukhuseleka kwentsapho yethu.
Ngubani ekufuneka alandele izikhokelo ezitsha zokhuseleko nezokucoca?
Bonke Ababuki Zindwendwe kufuneka balandele izinto zethu zokuzikhusela nokucoca zeCOVID-19. Funda okungakumbi Ngokucoca Okuphuculiweyo kwa-Airbnb.
Xa kufunwa yimithetho nezikhokelo zasekuhlaleni, bonke Ababuki Zindwendwe neendwendwe kufuneka banxibe imaski okanye into yokogquma ubuso xa beza kudibana ngobuqu baze bangasondeli komnye umntu kangangomgama oyi-6 feet (iimitha eziyi-2). Kwaye, sicebisa ukuba ungamkeli zindwendwe okanye uhambe ukuba ubusesichengeni sokosulelwa yiCOVID-19 okanye uneempawu zayo. Hlola izinto ezifunekayo Zempilo nokhuseleko kwiindawo.
Ungaqhakamshelana noMbuki Zindwendwe umbuze imibuzo ethile ngezinto zempilo yakhe nazenzayo ukuze azikhusele usebenzisa i-app yakwa-Airbnb.
Ukuba ufuna ukutshintsha okanye ukurhoxisa ukubhukisha kwakho, yiya kwicandelo elithi Uhambo kwiwebhusayithi okanye kwi-app yakwa-Airbnb ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ngeendlela zokurhoxa onokukhetha kuzo zokukubhukisha kwakho kwangoku. Senze le nto yokunceda ukuze sincede iindwendwe ziqonde iinkqubo neepolisi zokurhoxa.
Ngaphezu koko, iindwendwe ezingakwazi ukuhamba kuba zigula yiCOVID-19 zisenokufanelekela ukurhoxisa ukubhukisha kwazo zize zibuyiselwe yonke imali ngokuqhakamshelana noncedo lwabathengi. Funda okungakumbi ngepolisi yethu yemeko ongenakuyinceda.
Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb zivuliwe kwakhona kumazwe apho imithetho karhulumente esebenza kuzo izivumela. Iindwendwe naBabuki Zindwendwe kulindeleke ukuba balandele izinto ezithile zokuzikhusela kwiZinto Ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo, kuquka ukungasondeli ebantwini nokunxiba imaski xa umthetho okanye imiqathango yasekuhlaleni ifuna njalo. Kwaye, sicebisa ukuba uhlale ekhaya ukuba ubusesichengeni sokosulelwa yiCOVID-19 okanye awuziva kamnandi. Funda ngakumbi ngezikhokelo zethu zezempilo nezokhuseleko Zezinto Ezinokonwatyelwa.
Ukuba ukhetha ukwenza Into Enokonwatyelwa neqela lakho kuphela, unokukhetha ukubhukisha kwabucala. Ukuba akukhululekanga ukuba ube kunye neqela okanye ukuba Izinto Ezinokonwatyelwa ekuyiwa ubuqu kuzo azikavulwa kwakhona kwingingqi yakho, buka Izinto zethu Ezinokonwatyelwa Kwi-intanethi.
Iipolisi zokurhoxa zikhethwa Ngababuki Zindwendwe ibe ziyohluka ngokwezindlu. Unokufumana iinkcukacha malunga nepolisi yokurhoxa yendawo yokuhlala nganye kwiphepha lokuqala lendlu nganye. Songeze isihluzi esitsha sokukhangela ukuze kube lula ngakumbi ukufumana iindawo ezineepolisi zokurhoxa ezibhetyebhetye. Funda okungakumbi ngesi sihluzi sitsha.